Top 5 Kuhle Amadolobha Ukuze Chitha Christmas | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Top 5 Kuhle Amadolobha Ukuze Chitha Christmas
Ukuhamba Ngezitimela, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Holland, Isitimela Sokuvakasha eHungary, Isitimela Sokuvakasha Sweden, Qeqesha Ukuvakasha eSwitzerland, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela, Izikhangibavakashi Europe
2018 cishe siphelile, okungase kusho ukuthi Christmas iseduze! Abantu usalokhu ungatholi sikulungele, kodwa lezi zihambi, sekuyisikhathi okusezingeni eliphezulu ukuhlela uhambo. Uma ufuna edolobheni kwesokudla uzoqhubeka nokuba, sinezinto nawe simboziwe.
Lesi sihloko uzokunika uhlu oluningiliziwe imizi engcono uzoqhubeka nokuba. Yini enye, sizobe ukuthi ngazo zonke izinto ezijabulisayo ongazenza khona, kodwa okubaluleke kakhulu, kanjani ukuze uthole kule mizi ngesitimela.
Amsterdam akaconsi kulolu hlu njengoba mkhosi khona uqale ngaphambili kakhulu. Kusukela ngo-November, abantu kusukela Amsterdam uqale uKhisimusi nayo yonke eminye ebusika imicimbi.
I Indawo egcina amagugu esizwe Esigcawini enkabeni yedolobha siguqule emzaneni Fairytale Christmas. Lapha ungakwazi ukujabulela omunye the best Christmas izimakethe e-Europe. It ezingaphezu kuka uyakufanelekela Amsterdam njengoba ingenye yamadolobha engcono kakhulu yokusebenzisa Christmas.
Amsterdam udume izakhiwo zalo langa nemisele eminingi, kodwa idolobha inikeza okuningi. Ungakwazi ukujabulela ukushushuluza kuqhwa, Ferris isondo ugibele, kumnandi ukudla ezihlukahlukene iziphuzo, nokunye okuningi.
Ungase futhi ukujabulela Christmas ngisho nangemva kosuku kuphelile. Ngakusasa ngemva Christmas, abantu bakwa-Amsterdam ukugubha Boxing usuku.
Ungavakashela Amsterdam ngesitimela cishe noma kuphi eYurophu. Isiteshi emaphakathi uxhuma Paris, Frankfurt, Brussels, London, Zurich, Berlin, ePrague, futhi abaningi. Kukhona imigqa njalo iningi labo nabanye abaningi emadolobheni eNetherlands. Ngakho uma ufuna nge izitimela European ungakwazi ukujabulela eziningana Kuhle Amadolobha Okuthakazelisayo Chitha ngoKhisimusi 1 uhambo.
Kuhle Amadolobha Okuthakazelisayo Chitha Christmas, Pick enomoya – Stockholm, Sweden
Kwakungase kube umnkantsha, kodwa usazoqhubeka uthande oyikhethile ukuba Stockholm ukhisimuzi. Sweden yilona lizwe ukuba phakathi amaholide ebusika ngoba abaseSweden muhle ngokwabo.
Umuzi ngokwayo ezihlotshiswe kahle ngesikhathi iholide, futhi inikeza okuthile kokubili zanamuhla futhi bendabuko. Kuyinto ukukhetha phezulu njengoba ingenye yamadolobha engcono kakhulu yokujabulela Christmas.
Kukhona izibani yonke indawo futhi izimakethe kaKhisimusi emigwaqweni bephethe ukudla okushisayo neziphuzo. Uzoba crazy hhayi ukuzama okumnandi kubhakwa nesinamoni namabhanisi noma gingerbreads kwelinye amabhikawozi eziningi zaleli dolobha! Sweden ayinikezi lukhulu lezinketho ukudla ahlukahlukene, kodwa uzofuna akukho okunye uma uzama Bun nesinamoni nge inkomishi ashisayo yekhofi.
Ngaphezu kwalokho, uzothola ithuba lokuvakashela kwelinye lamadolobha amahle kakhulu ubudala e-Europe. Khona-ke ongema wonder ubuka imiselekazi ehlukahlukene eyinkimbinkimbi, iziteshi emfuleni, futhi nokuningi.
Ungathola Stockholm ngesitimela evela ezindaweni eziningana e-Europe njengoba Sweden ixhunyiwe ngokusebenzisa Copenhagen. Ngaphezu kwalokho, ungafuna ukuthatha ukuqeqesha ukuba ezinye zezitho enyakatho yezwe. Kulapho Northern Lights kukhona bhá futhi emuhle kakhulu.
Budapest, inhlokodolobha yaseHungary nedolobha elihle kunawo wonke, ingenye yezindawo best uzoqhubeka nokuba ngoba yezizathu eziningana. Idolobha lilele emfuleni iDanube futhi linikeza okuthile umbukwane isikebhe ugibele. Ungabona cishe zonke izakhiwo mlando, kusukela emfuleni.
Ngaphezu kwalokho, uzoba ukubona Buda emangalisa Castle futhi iPhalamende Isakhiwo. Ngokuqondene ongazenza ebusika, kunezinhlangano eziningana. Kusukela ugibele streetcars ukuze ngezicathulo ku Budapest Ipaki ice rink, kukhona njalo izinto eziningi ukwenza lapha. Futhi, ungakhohlwa ukuvakashela emakethe kaKhisimusi Vorosmarty Square futhi engenzeleli kaKhisimusi Basilica.
Emaphakathi wesitimela esiteshini ukuthi kubukeka sengathi weza ngqó kusuka incwadi Harry Potter imaphakathi. It uxhuma Budapest ukuba iningi emadolobheni amakhulu eYurophu, futhi zanda. iziteshi ezimbili ezengeziwe futhi Ziningi isitimela imigqa, ukwenza beya futhi bebuya Budapest kushelele.
Kuhle Amadolobha Okuthakazelisayo Chitha Christmas, Pick esiyingqayizivele – Strasbourg, France
Strasbourg akuyona kuphela lesikahle ukuchitha kaKhisimusi, kodwa kuphinde inhlokodolobha Christmas. Awukwazi ukuphuthelwa ukuvakashela le edolobheni langa ngoKhisimusi.
Strasbourg inama izimakethe engu-400 ubudala Christmas, echaza ngokucacile ukubaluleka Christmas kuleli dolobha.
Ngaphezu kwalokho, kuningi ezinye izinto ukubona wenze. Ungavakashela ngokubabazekayo Strasbourg Cathedral noma elinesithunzi 18th ekhulwini Palais LaseRohan. Ungakwazi ngisho nokubukela ama emangele big isihlahla sikaKhisimusi eduze Ukwabelana Village, noma ukuzulazula emhlabeni enkabeni yedolobha. Into kuphela lokho ezithile ukuthi awusoze uthole nesithukuthezi kuleli dolobha imilingo.
Strasbourg itholakala maphakathi Western Europe, ku komngcele waseJalimane. indawo yayo iyenza ukuxhuma iningi amadolobha e-Europe. Lokho kusho ukuthi ukuthola Isitimela edolobheni kuyoba lula kakhulu.
Amadolobha Kuhle ukuba Chitha Christmas futhi liyindawo engcono kakhulu ukuphila – Geneva, Switzerland
Omunye izindawo kakhulu eYurophu, uma kungekhona ukuthi emhlabeni wonke, ebusika, kuyinto Switzerland. Yingakho-Geneva, elinye lamadolobha kunawo eSwitzerland, nakanjani phakathi kwemizi engcono kakhulu yokujabulela Christmas.
Umuzi uhlezi phezu loMfula Lake Geneva, futhi lapho kufika ubusika, lonke echibini kuyinto elikhazimulayo. Izinkulungwane izibani kukhanye kusuka ezitolo eziseduze, nezitebele zamahhashi, nezakhiwo zomphakathi, futhi Christmas imihlobiso.
Esinye sezizathu thina abelethwe Geneva ngoba Kuhle Amadolobha Okuthakazelisayo Chitha ibhulogi UKhisimusi wawungasho ukuthi abathandi Ukudla kufanele futhi ajabule njengoba pre leli dolobha-emakethe Christmas linikeza ukudla kusuka emhlabeni wonke. Yini enye, ungaya yezitolo Ukuhamba ngesikhathi Street, bese uvakashela amanye zibona lezi zindawo eziphawuleka kakhulu. Lezi zihlanganisa Palace eNhlangano yeziZwe, St Pierre Cathedral, amanzi nolunye, futhi nokuningi.
Kukhona izitimela njalo kusuka kwamanye amadolobha e-Switzerland efana Bern futhi Zurich ukuthi kungathatha wena eGeneva. Nokho, kukhona okuningi izitimela uya nokusuka Italy, France, Germany, futhi nokuningi. Amathrekhi hamba kusuka amadolobha afana Lausanne, Paris, Venice, Milan, nice, Verona, futhi abaningi. Ngaphezu kwalokho, central wesitimela esiteshini ungaphakathi kakhulu enkabeni yedolobha.
Ngakho khona unayo it, uhlu oluphelele imizi engcono kakhulu ukuchitha kaKhisimusi. Uma ufuna ulwazi oluthe xaxa kwi Izincwajana zemininingwane Wokujikeleza futhi kula madolobha, ukhululeke Xhumana Londoloza Isitimela nganoma isiphi isikhathi.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-christmas%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#Hungary #traveleurope europetravel isweden amathiphu trainjourney Tranride izitimela ithiphu yesitimela amathiphu isitimela Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi amathiphu isitimela sokuvakasha uhambo ngesitimela Izikhangibavakashi travelamsterdam travelfrance travelswitzerland